Xasaasi: Madaxweynaha Kililka Oromia & Taliyaha Ciidanka Milateriga Itoobiya Oo Safar Qarsoodi Ah Ku Tegay Muqdisho – Great Banaadir
Madaxweynaha Kililka Oromia iyo Taliyaha Guud ee Ciidanka Itoobiya ayaa la sheegayaa in ay booqasho qarsoodi ah ku tageen Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Shimelis Abdisa iyo Lieutenant General Birhanu Jula Gelalcha ayaa safar aan la shaacin oo qarsoodi ah ku tegay Muqdisho 15-kii bishan iyaga oo lagu waramayo iney kulan la qaateen Farmaajo iyo saraakiil kale oo katirsan maamulkiisa.
Waftigan ayaa Farmaajo kala hadlay Xaaladda Dalka, Doorashooyinka, Ciidanka Itoobiya ka jooga Soomaaliya iyo arrimo kale oo xasaasiya.
Weli safarkaan qarsoodiga ah kama aysan hadlin Villa Soomaaliya, lamana yaqaan sababta keentay in la qariyo kulanka dhexmaray madaxda dalka iyo waftiga ka yimid Itoobiya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa xidhiidh wanaagsan la sameystay Dowladda Itoobiya iyadoo la xasuusto in Ololahiisa Madaxtinimada Dalka ee Dhamaadkii 2016 iyo Bilowgii 2017 uu ku qotomay Naceybka Dowladda Itoobiya.
Xiqasho Qaran Media Group
Xildhibaano Maanta Lagu Doortay Magaalada Baydhabo